Isebenza njani i-Red Emperor CBD kunye ne-Delta 8 yeeTHC iimveliso
I-Cannabidiol (i-CBD) yinto eyenzeka ngokwemvelo kwi-cannabinoid kwaye yenye yezona ndawo zininzi ze-hemp. I-CBD ikhuselekile ukuba ingadliwa kwaye ayisiyongqondo, ihlala ixesha elide kwiziphumo zayo eziluncedo zempilo ngaphandle kwemiphumo emibi yamayeza kagqirha.
Inkqubo yokukhupha i-Red Emperor ye-CBD ayinamachiza kwaye isebenzisa uxinzelelo lwekhabhon diokside (CO2) ukutsala ii-phytochemicals (ezinje nge-CBD) kwisityalo se-hemp. Inkqubo yethu ikhululekile kuzo naziphi na izinyibilikisi ezirhabaxa ezisetyenziselwa ukukhupha namafutha CBD. Ukukhutshwa kwe-CO2 kulunge ngokusingqongileyo kwaye akunetyhefu, kuthathwa njengeyona ndlela ikhuselekileyo yokutsala izityalo emhlabeni.
I-CBD ye-Red Emperor isebenza neefama eziqinisekisiweyo ze-FDA e-Colorado, California nase North Carolina. Sinika amafama ethu e-CBD ii-hemp clones ngemfuza eyahlukileyo yokuqinisekisa ukuba bavelisa iimveliso ze-hemp zodidi lwamagama. Emva nasemva kokuvunwa kwezityalo ze-hemp, amafama ethu avavanya izixhobo zezityalo ukuqinisekisa ukuba awanazo izinto zokubumba, ukungunda, okanye isinyithi esinzima.
Emva kokuba inkqubo yovavanyo igqityiwe, amafama ethu emva koko athumela kwaye asebenzise izixhobo zezityalo ezityebileyo ze-phytocannabinoid kwenye yezixhobo zethu zokukhupha ezinelayisensi ezijika iimveliso zibe ziimveliso zethu ze-CBD ezikumgangatho wehlabathi.
Iimveliso zethu ezigqityiweyo ziveliswa kusetyenziswa iinkqubo eziqinisekisiweyo ze-ISO okanye i-GMP. Iintlobo zethu ezizodwa kunye nelungelo elilodwa lomenzi we-CBD ephezulu kunye ne-THC encinci ye-marijuana hemp ivelisa ngokwemvelo i-cannabinoids kunye ne-terpenes kunayo nayiphi na indawo efanayo yomhlaba okanye iintlobo ze-hemp ezifumaneka kwi-hemp yaseTshayina okanye yaseYurophu.
Ngelixa ezinye iinkampani zazizalisela iintlobo ze-cannabis ukuvelisa i-THC engaphezulu, iqela lethu lemfuza lalisenza iintlobo zentsangu ukuvelisa i-THC THC ukuvelisa iintlobo ezingaphezulu kwe-psychotropic cannabinoid ezinje nge-CBD, i-CBG, i-CBN, IDelta 8 THC, Kunye neCBC
Zonke iimveliso zethu ziyilelwe ukuba zibonakalise uluhlu olupheleleyo lwee-cannabinoids kunye ne-terpenes, kunye nayo yonke i-Red Emperor CBD kunye IDelta 8 THC Imveliso iqinisekisiwe yilebhu yomntu wesithathu ezimeleyo ukuqinisekisa ukuba iimveliso ezikhuselekileyo, ezingatshintshiyo, kunye namandla aphezulu ezivumela abathengi bethu ukuba baphile ubomi obusempilweni.